October 2019 – siifsiin
Namoonni jeeqama sammuu qabani akkaataa itti yaadani, itti hubatani fi amala isaanii ilaalchisee rakinni isaan qaqqabuu danda’a. Jecha gar-biraan, yaadni, hubanno fi amalli isaani wal-horfaa ta’a jechu dha. Kunis waliin dhufeenya nama wajjin qabaatan, jiru fi gammachuu jireenya isaani likka malee xuqa. Jeeqama sammuu qabaachuun namichaaf rakkina dha, maati isaafis rakkina dha. Haa ta’u malee … Continue reading Jeeqamni Sammuu Maali?
Namoota sammuu qaroo bu'aa olaanoo argamsiisan keessaa, qaroomina sammuu guddaa kan qabu fi amaloota adda qabuun kan beekamu tokko Albart Anistaayiin dha. Anistaayiin akkamitti anniisaa atoomii keessaa cuunfuu akka dandeenyu nu barsiiseera. Tarii namni kun samuu xiqqoo qabnu kana keessaa akkamitti waan bu'aa fidu tokko yookan lama baasuu akka dandeenyu nu barsiisu danda'a ta'a. Kanaaf … Continue reading Qaroo sammuu
Bakka Bashaanana Haroo Wanti. Dacheen oromiyaa uumamaan badhaatudha. Haroo wancii mee wal-baraa! Haroon Wancii godina Kibba Lixaa Shawaa, Aanaa Wancii keessatti, Finfinnee irra fageenya 152km, magaalaa godina (Waliso) irra 38km, magaalaa Aanaa irra 27km fagaachuun bakka gahumsa tuuristii argamudha.Daandiin cirraachaa hanga haroo kanattii geessu kan jiru yemmu ta’u yeroo ammaa daandii asphaaltii hojeechuuf mootummaan karooraa … Continue reading Haroo Wancii
Harbuu fi Leemmana
Gaaf tokko Harbuun baay’ee guddaan tokko qilleensaan buqqifamee, laga tokko irratti kufe. Harbichi Leemmana gidduutti kufe. Harbuun leemmana gidduutti kufe kunis guddaa rifate. Leemmanni qilleensa jabaa sana irraa hafee dhaabata. Isaa boodas akkas jedhee gaaffii gaafate. “Isin warri sasalphoo fi dadhaboon kunniin, qilleensa akkas jabaatu sanaan attamitti akka caccabdanii hin hurraa’in haftantu nadinqaa jira isaaniin … Continue reading Harbuu fi Leemmana
1.Afaan keenya guyyattii gororaa litira tokko oomishuu danda’a. 2. Yeroo tokko tokko sammuun keenya kan caala yeroo rafnu hojiif qophii ta’a. 3. Namni tokko giddugaleensan gosa baakteriyaa 67 garaa isani keessa qabu. 4. Waggaatti giddugaleesan seeli gogaa kiloogiraama 4 hir’ifna. 5. Daa’imni yeroo dhalatanii hanga ji’a tokko ga’anitti imimman hin buusan. 6. Onneen nama gidugaleessan … Continue reading Ajaa’iba wa’e ilma namaa
Seera barreeffama Afaan Oromoo keessatti waantota dhorkaa ta'an Qubee dubbifamaas ta'e dubbachiiftuun barreeffama keessatti gosti tokko, lamaa ol ta'ee walitti aanee barreeffamuu hinqabu. Hub. Yoo qubee dachaa ta'e malee. Akkasumas, dubbachiiftuun yoo hudhaan gidduu gale malee.Dubbachiistuun gosti lama walitti aanee barreeffamuu hin danda'u.(hudhaan gidduu galuu qaba) Bakka irra butaatti sagaleen jabaachuu hin danda'u. Fkn: … Continue reading SEERA BARREEFFAMA AFAAN OROMOO
Ramoowwan tokko tokko yoo waan nyaatan dhaban qaama isaani ni nyaatu.Qorichii qusanaa maatiin namoonni fudhatan gorilla ille tajaajila walfakkataa kenna.Qusannoo Saantima $0.01 jalqabdee, guyyaa guyyatti yoo dacha isaa itti dabalte waggaa 27 tti abba milliyonaa taata.Namoot addunyaa kana keessa jiraatan keessaa 50% bilbila fayyadamuu hin jalqabne.Akkuma ashaaran quba keenya adda adda ta’e ashaaran arraba keenya … Continue reading Waantota dinqisisoo